Sidee inay iska iibiso online aan tallaabo doon talaabo ay tahay habka ugu sahlan ee sida aan iibinta karaa raaxada si deg deg ah via adeeg internet marketing online
Sida loo Iibiso Doon qiimaha ugu sarreeya
Waa fikrad fiican in doon ka waraystay si aad u barato oo ku saabsan iyo hagaajin wax dhibaato ah iman kara ka hor inta doon ah uu aado suuqa. Haddii hooseysa ama topsides u baahan tahay shaqo rinji ah, waxaa samayn. Haddii aad rinjiyaynta godka, isticmaali rinjiga caddaan ama madow buluug kaliya. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid Somailand ku talinaysaa in aan lacag la qarashgareeyo on casriyaynta electronic. Waxaad ka heli doonaa oo keliya qayb yar oo ka mid ah maalgelinta in dib.
Waxay xaq u leedahay qiimaha. Waxay xaq u leedahay qiimaha. Waxay xaq u leedahay qiimaha.
Tag on line iyo hubi dhammaan goobaha internet-ka. Yachtworld, Ganacsade Doon, Boats.com iwm. iwm. Print nuqul ka mid ah oo dhan doonyo u dhigma idinkaa iska leh. Fiiro gaar ah tirada guud ee. Fiiro gaar ah wax ugu muhiimsan doonyo kuwa kale ayaa ah ama aan haysan. Sidoo kale fiiri saacadood kale doonyaha engine, ma u leeyihiin trailer ah, rinjiga hoose, iwm, iwm. Tani waa dhan aad muhiim u ah. Waxaad u baahan tahay inaad is barbar tufaax ah in tufaax. (Tusaale - hoose rinji doomo trailerable iibiso yar.) Ogsoonow in meelaha halkaas oo doonniyihii waxay ku qoran yihiin. (Tusaale - doomo Florida iibiso yar - kulaylka, Qorraxdu, dabaysha, milix iyo sanadkii isticmaalka wareega.)
Wac ah dilaaliinta yar in ay leeyihiin doonyo u dhigma idinkaa iska leh. U sheeg qofka aad tahay iyo waxa aad. Dilaaliinta Inta badan waa in uu ahaado mid aad iskaashi. Weydii sababta ay doon ay ku qoran ma iibin. Weydii waxa ay la tahay ku qaadan lahaa in ay iska iibiyaan doon. Weydii waxa ay la tahay doontaada qiimihiisu yahay. Weydii haddii ay sii socotay inay u ganacsan waxa ay ku siin doono, waayo,.
Hubi BUC Hanuuniyaa binta iyo NADA, laakiin ha iimaanka badan aan ku riday waxa ay ku odhan. Inta badan oo ka mid ah, in my opinion, waa gebi ahaan aan sax ahayn balse ay yihiin waxa bangiyada ku saleeyaan aad qiimo amaah ah doomo on. Haddaba in kastoo aan sax ahayn ay weli tahay wax ay ka fikiraan.
Hadda fadhiistaan. Eeg dhammaan xogta aad soo ururiyay. Xisaabi waxa ay si dhab ah kharash inay ceshato doontaada for a bilood ka badan dhowr. Daacad Naftaada! (Fiiro: waxa lagugu leeyahay aad doon waxba u qaban la qiimaha tafaariiqda.) Ha ka werwerin gelinaya "qolka u oynayo" ee lambarka. Waxaad haysan doontaa in aad walwalo "qolka in ay ka doodaan" haddii qofna ugu baaqaysaa. Hadda qiimaha doontaada inuu noqdo mid soo socda in ay ka iibiso. Waxaan ogahay in ay xanuun badan laakiin ma xusuusan iibiyaha kasta abid ii sheegin "wow, Waxaan iibin ii doon si raqiis ah!"
Top TOBAN TALOOYIN OO Iibinta doonta
1. Waxaa Market!: Ku baahi weyn loola. Xayeysiis Place saxaafada doon deegaanka, wargayska weyn iyo, haddii ay doon weyn ama mid ka mid ah helitaanka xadidan in iibsada tahay safri doonta gobolka si ay u arkaan, meel xayeysiis ee goobaha gobol iyo qaran pricier. Xayeysiis Picture barbaro gaadiidka dheeraad ah. Meel Rent qaar badan oo jid-dhinac halkaas oo boqolaal ag marayayna waa arki karo-badan ee aad ku marayso.
2. Loo eryay-up!: Bilow engine oo u kululee saacad ka hor rajo yimaado si ay u arkaan doon ah. Batari A dhintay ama balky bilowga xataa u fiican engine-jirsado iibsada off.
3. Dhaarta u Daacad Noqoshada: Muuqataa waa muhiim. Buufiyo-ku wax alaabta lagu dabaqi karo iyo tirtiraa-off sahlan oo dhakhso ah. Lalayeen ma ka badan maalintii, laakiin waxaa fiican in rajada ugu yeedhay oo sheegay in uu noqon doono in ka badan saacad.
4. Yabooh faaruqa ah: Waxa fiican in ay muujiyaan goobaha stowage madhan oo tacliiq sida waasac markaas ay yihiin in ay leeyihiin dhammaan qalabka aad u buuxda iyaga in in dhibic ka mid ah wax qarqinaya. Ka qaad aad soo cabatay.
5. Points Touch: A shaqada xirfadeed si faahfaahsan macno u doon xaalad sanayd. Haddii heerka doon aad "Celcelis ahaan" ama "wanaagsan" xooga saarin dhanka ah ceebaalowyo dheeraad ah oo cad. Wasaqda miridhku xarunta-baxay dhiig ka soo xir-, dib-u-cajalad xoolo karbaash boot, de-dufan engine ah, nadiifiso Bilge ah, iwm. Haddii qol waa laga urin karo, noqaan meel freshners hawada.
6. Fogged-baxay: Haddii daahyada cad yihiin xoqo ama baynamutaan da'da, kaxeeyo la daawado ee bilowga ah.
7. Ayuub ugu hooseysa: Haddii doon waa hoose rinji, codsan jubbad cusub. Waxay ka dhigaysa af doon u fiiriyaan. Sidoo kale buufin motor rinjiga iyo drive daran skegs in ay leeyihiin rinjiga ka xirto-off.
8. Trial Badda: Iyada oo shiraac ah laga saaray, oo dhan, laakiin qalabka badbaadada guriguu dhigtay xeebta iyo iftiin shidaalka iyo biyaha, aad diyaarad doonistii doon fudud, xamili more nimbly, iyo gaadhaan dhakhso xawaaraha sare-dhamaadka ah. Isku day inaad ku qanciso wax iibsadaa in la xadido door-weheliyaan saaxiibada iyo qoyska si ay u yar intii suurto gal ah, sababo ee kor ku xusan, oo sidaas oo kale "roominess" dhabta ah ee doonnida, ma aha xanuujin cad.
9. Paper Chase: Hayso horyaalka oo dhan, diiwaangelinta, damaanad la dheereeyey iyo, haddii la heli karo, diiwaanka adeegga gacanta ku gal ah. Waxaa cajiib ah, xataa haddii falcelin hore iibsadaha ee waxa ay u muuqataa ho-Hum.
10. Xaqiiqadii: Jaantuska aad qiimo hoose-line fiican ka hor shirka iibsadaha ugu horeysay. Tixgeli kharashka dollar ah advertising ah, kaydinta iyo dayactirka halka waa iib iyo sidoo kale kharashaadka waqti ku lug muujinaya doon ah.
Qaadato: Saddex Talooyin More ...
11. Aamus-aamus: HA Muujin aad qiimaha ugu wanaagsan telefoonka qof oo aan arkay oo doonnida. Ka hor inta iibsadaha ah arkaa doontaada, uu helay ma maalgashiga dareenka. Ka sokow, sidee baad ku garanaysaa oo xataa wuu u awoodin? Plus, iibsada on arin inta badan waxay leeyihiin saaxiibo wac sida "rajada cusub" si loogu dadaalo in aad ku turaanturoon ilaa.
12. Lacag: Lacagta caddaanka ah waa boqorka. Jeegaga waa weyn-mar way kala cadeeyo. Sidaas waxa loogu yeero "Checks Bank" ma yihiin sida ugu fiican ee dahabka. Oo kuwan oo dhan sameeyo waa "cadeynayaa" in wax iibsadaa ay leedahay lacagta jeeg on account ku saabsan waqtiga la bixiyay. Waxay la tirtiri karaa sida ugu fudud kansali jeeg qof ahaaneed. Ha saxiixin doon ah ilaa aad ogaatid in aad ka isticmaali karto lacag iibsadaa ee.
13. Su'aal Big: Buyers wariyaasha weydiiso sababta aad u iibiso. Well, lacag doqonimo ah. Laakiin ma baad u odhan kartaa in (ama in ka daaleen Ambaasadoor aan faa'iido ah damaanad ah). Nolosha laga beddelo waa jawaabta ugu habboon ee. Waxaad dhahdaa aad rabto in aad isku daydo ka saaciday inay oo aan samayn karo doonnida furan, caruurta aad ha kuu raaco dambe si aadan u baahan tahay doon ski ah, aadan xeebaha kalluumeystaan ​​mar dambe si downsize ah waa in si, wax kasta oo.